Kaymaha afarta dabaylood: yaa qoray, muxuu ku saabsan yahay | Suugaanta Hadda
Kaymaha afarta dabaylood
Sannadkii hore buuga ayaa la iibiyay Kaymaha afarta dabaylood, fal -dambiyeed iyo riwaayad qarsoodi ah oo muddo gaaban gudaheed ku heshay daabacaaddii labaad. Waxaa laga yaabaa inaad ku aragtay dukaamada buugaagta oo ay ishaadu qabatay.
Waxaa lagu dejiyay Cantabria, buuggani wuxuu ka mid yahay kuwa wax badan bixinaya si looga hadlo, laakiin maxay tahay kaynta Afarta Dabaylood? Yaa qoray? Maxay tahay inaad akhrido? Waan kuu sheegi doonaa.
1 Yaa qoray kaynta Afarta Dabaylood
2 Waa maxay kaynta Afarta Dabaylood ku saabsan tahay
4 Ma buug gaar ah baa mise waa sheeko?
5 Waa maxay sababta aad fursad ugu siineyso kaynta afarta dabaylood
Yaa qoray kaynta Afarta Dabaylood
Xigasho: María Oruña
Kaymaha afarta dabaylood ma noqon doonto buug haddii qoraaga María Oruña uusan lahayn fikradda. Si kastaba ha noqotee, sida sheekooyin kale oo badan oo ka hadlaya qayb ka mid ah taariikhda, waxay u baahnayd dhowr sano oo dukumiinti ah in wax walba la xidho oo si fiican loo xidho. Runtii, dhammaadka buugga qoraaga laftiisu wuxuu u sheegay qaybaha ay dhab yihiin (laga soo bilaabo sheekada ama halyeyga) iyo qaybta ay tahay mala -awaal, si aan fikrad uga helno cilmi -baarista weyn ee ay samaysay.
Laakiin waa kuma María Oruña?
María Oruña waxay ku dhalatay 1976 Vigo. Iyadu waa qoraa Galiciyaan ah iyo buuggan, The Forest of the Four Winds sinaba uma aha buuggeedii ugu horreeyay. Guusha weyn waxay u timid qoraagan iyada oo leh Puerto Escondido saddex -geesoodkeeda, saddex buug oo ay daabacday guriga daabacaadda ee Destino oo astaan ​​u ahayd markii ugu horreysay ee sheeko -fal -dambiyeedka, oo leh guul aad u weyn maxaa yeelay waxaa markiiba lagu turjumay Catalan, Jarmal iyo Isbaanish. .
Kaymaha afarta dabaylood ayaa ah sheekadii ugu dambaysay ee qoraaga, oo ay sii daysay 2020, iyada oo si buuxda ugu xidhan, laakiin taasi kama hor istaagin inay guulaysato.
Hadda, iyadu ma qoraa uunbaa? Waa hagaag runtu waxay tahay maya. Runtii Tababarkeedu waa sharci, maadaama ay tahay qareen. Laakiin taasi kama dhigin inay u dagaallanto inay noqoto qoraa iyo waliba qoraa. Muddo 10 sano ah waxay u shaqaynaysay sidii qareen iyo shaqaale labadaba, 2013-kii waxay ahayd markii ay soo saartay sheekadeedii ugu horreysay ee is-daabacday, La mano del arquero, oo ka hadashay dhibaataynta goobta shaqada iyo ku-takrifalka awoodda. Sida laga soo xigtay qoraaga, sheekadu waxay ku salaysnayd kiisas iyada lafteedu ku ogaatay shaqadeeda.
Waa maxay kaynta Afarta Dabaylood ku saabsan tahay
Waa inaad ka ogaataa The Forest of the Four Winds oo ah sheeko cusub oo waxay ku dhacdaa laba waqti. Dhinaca kale, wixii la soo dhaafay, oo aad ku haysato Dr. Vallejo iyo Marina, maalinba maalinta ka dambaysa qarnigii XNUMXaad iyo waxaas oo dhami, rag iyo dumarba.
Dhanka kale, waxaad haysataa hadiyad, Jon Bécquer, oo ah nooc cilmi -baare oo ugaarsanaya runnimada, ama aan ahayn, halyeey.
Sheekadu waxay u dhexaysaa labada xariiq, maaddaama dhammaan jilayaasha ay aad isugu dhow yihiin. Waxaa la dhihi karaa, in kasta oo barta isku xirnaanta ay tahay dil isku xira qarnigii XNUMXaad iyo Jon Bécquer maanta, marka sheekadu sii socoto waxaad aragtaa sida jilayaashu aad ugu badan yihiin qarsoodiga ugu weyn: halyeeygii sagaal faraanti.
Sida laga soo xigtay halyeeygan, waxaa jiray sagaal siddo oo sagaal kiniisadood oo lahaa awoodo sixir, oo awood u leh inay bogsadaan. Laakiin wax badan kuuma soo bandhigi doonno si aadan buugga wax uga xamdin.
Waxaan kaa tagnaa sinopsis:
Bilowgii qarnigii XNUMX -aad, Dr. Vallejo wuxuu ka safray Valladolid kuna aaday Galicia isaga iyo gabadhiisa Marina si ay dhakhtar ugu noqdaan keniisad awood badan oo ku taal Ourense. Halkaas waxay ka ogaan doonaan caadooyin aad u gaar ah waxayna la kulmi doonaan dhicitaanka Kaniisadda. Marina, oo danaynaysa dawada iyo cilmiga dhirta laakiin aan fasax u haysan inay waxbarto, waxay la dagaallami doontaa heshiisyada waqtigeedu ku soo rogo aqoonta iyo jacaylka waxayna ku dhex bakhtiyi doontaa tacabur qarsoon in ka badan kun sano.
Waqtigeenna, Jon Bécquer, oo ah cilmi -baare cilmiga cilmiga dadka ku takhasusay oo ka shaqeeya helidda qaybo taariikhi ah oo lumay, wuxuu baaraa halyeeyga. Sida ugu dhakhsaha badan ee ay u bilaabaan baadhitaanadooda, beerta keniisadii hore maydka nin ku labisan caadadii Benedictine ee XIX. Xaqiiqadani waxay Bécquer ka dhigi doontaa inay si qoto dheer u gasho kaymaha Galicia iyagoo raadinaya jawaabo iyo inay hoos u degto tallaabooyinka la yaabka leh ee waqtiga.
Duurka Afarta Dabaylood waxaan kula kulmi doonnaa jilayaal badan laakiin, waxaa jira saddex ka mid ah, oo u taagan inay yeeshaan codka heesta, ama sababtoo ah qoraagu wuxuu diiradda saarayaa iyaga. Kuwani waa:
Dhakhtar Vallejo. Waxay la xiriirtaa dabeecadda Marina (sidoo kale ugu weyn), maadaama ay tani tahay gabadhiisa. Jadwalkiisa ayaa iska leh wixii la soo dhaafay, maadaama uu kuu sheegi doono taariikhdiisa bilowgii qarnigii XNUMX -aad markii uu Galicia la degay gabadhiisa si uu dhakhtar uga noqdo keniisadda Ourense.
Badda. Waxaa laga yaabaa inay tahay dabeecadda dhabta ah ee sheekada. Wuxuu yimid macbudkii Ourense sanadkii 1830 wuxuuna bilaabay inuu xiiseeyo daawada (aabihiis) iyo botaniga (wadaadada iyo aabihiis). Markaa, waxay ka leexataa waxa “caadiga” u ah haweeneyda wakhtigaas, oo ay ka horreyso. Xaaladeeda sida haweeney micnaheedu waa inay la dagaallanto xaddidaadahaan la soo rogay.
Jon Bécquer. Waa dabeecad ku salaysan mid kale oo dhab ahaan jirtay. Buugga dhexdiisa waa baare farshaxan oo ka dambeeya halyeeyga sagaalka faraanti. Qaar waxay ku tilmaamaan Indiana Jones laakiin uma muuqdo inuu jecel yahay shaqsiyaddiisa darteed.
Ma buug gaar ah baa mise waa sheeko?
Marar badan, akhrinta qoraa cusub waxay na siisaa xoogaa cabsi ah, gaar ahaan marka la eego qaabka hadda loo sii daayo laba -geesoodka, saddex -geesoodka iyo sagasyada oo ka kooban buugaag badan, halkaas oo sheekadu aysan ku dhammaan.
Haddii aan sidoo kale tixgelineyno in tan ka hor, María Oruña ay soo saartay sedex geesood, waa iska caadi inaad shaki ka qabto in buuggu yahay mid gaar ah ama qeyb ka mid ah sheekada.
Waana qoraaga laftiisa oo si cad u sheegay: a sheeko is-gunaanad ah. Yacni, waxay ku bilaabmaysaa kuna dhammaataa isla buugga; iyada oo aan ka badan. Taasi waxay ka dhigaysaa dhammaan cilmi -baaristii iyo dhagartu inay ku koobnaadaan hal buug oo si fudud loo akhrin karo laba maalmood gudahood (illaa iyo inta uu ku qabanayo, dabcan).
Waa maxay sababta aad fursad ugu siineyso kaynta afarta dabaylood
Wax yar ayaad hore uga taqaanay The Forest of the Four Winds, laakiin waxaa laga yaabaa inaadan weli isku dayin inaad tijaabiso, ama ma ogid inaad runtii akhrido iyo in kale. Waxaa jira dhowr sababood oo loo sameeyo:
Waa buug gaar ah, oo iskii u dhammaystiran. Haddii aadan hore u akhriyin qoraaga, gelitaanka saddex -geesoodka ayaa aad u badan. Laakiin waxaad akhrin kartaa buug leh bilow iyo dhammaad si aad u ogaato inaad qalinkiisa jeceshahay iyo in kale.
Waxay ku saabsan tahay a qayb ka mid ah taariikhda Spain. Marar badan waxaan ka aqoon badan nahay taariikhda dalal kale oo aan annaga ahayn. Taasina runtii waa murugo. Markaa haddii aad rabto inaad ogaato sida dadku ugu noolaa aaggaas Spain ee qarnigii XNUMXaad oo aad sidoo kale wax uga barato alchemy, botany, daawo ... waad isku dayi kartaa.
La haweeneydu waxay leedahay door hoggaamineed ee sheekada. Oo waxaan ka hadleynaa qarnigii sagaal iyo tobnaad, laakiin waxaan arki doonnaa sida haweeneyda halkan joogta ay ugu qiimayso si aad u yaab badan.
Miyaad akhriday kayntii afarta dabaylood? Maxaad ka qabtaa isaga?
Wadada buuxda ee maqaalka: Suugaanta hadda jirta » Suugaanta » Buugaag » Kaymaha afarta dabaylood